Controversy grips U-19 World Cup as West Indies 'mankad' Zimbabwe to reach quarterfinals - Firstpost
Sports hidden Feb 03, 2016 07:43:39 IST
Chittagong: The West Indies took the last quarter-final spot in the ICC U19 World Cup with a thrilling, but controversial, two-run win over Zimbabwe in Chittagong on Tuesday.
Zimbabwe, chasing the West Indies' 226 for nine, began the last over needing just three runs to win with one wicket in hand amid mounting tension.
The mankad incident at U-19 World Cup game between West Indies and Zimbabwe. Image courtesy: Twitter
Zimbabwe coach Stephen Mangongo was expectedly disappointed.
Brief scores: Group A: Bangladesh beat Namibia by eight wickets in Cox’s Bazar
Updated Date: Feb 03, 2016 07:43 AM
Tags : #Cricket #Mankad #Mankading #Run Out #SportsTracker #Under-19 World Cup #West Indies #Zimbabwe
1Controversy grips U-19 World Cup as West Indies 'mankad' Zimbabwe to reach quarterfinals